टाटाले ‘विश्वस्तरीय’ प्रविधि आत्मसात् गरेको छ : राजनबाबु श्रेष्ठ - Naya Patrika
टाटाले ‘विश्वस्तरीय’ प्रविधि आत्मसात् गरेको छ : राजनबाबु श्रेष्ठ
नेपालमा अटोमोबाइल्सको मुख्य सिजन दसैँ मुखैमा आइपुग्यो । अटो बजार कत्तिको तातेको छ ?
नेपालमा प्यासेन्जर कारका लागि दसैँ मुख्य सिजन हो । तर, कमर्सियल गाडीका लागि दसैँ मुख्य सिजन होइन । सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले टाटा मोटर्सका प्यासेन्जर र कमर्सियल सेगमेन्ट दुवै बिक्री गर्छ । कमर्सियल गाडीहरू बर्सातको समयमा बाहेक वर्षभरि नै बिक्री भइरहन्छ । प्यासेन्जर कारको बजारले दसैँमा पिकअप लिन्छ ।
वर्षभरि हुने बिक्रीको करिब २०/२२ प्रतिशत बिक्री दुई महिनामा हुन्छ । बसका लागि पनि दसैँ ‘पिक सिजन’ हो । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यसपटक दसैँमा बसको बिक्री बढ्न सकेन । तैपनि, समग्रमा भन्नुपर्दा दसैँको मुखमा अटो बजार तातेकै छ ।
राजनबाबु श्रेष्ठ, सिइओ, सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालि
दसैँमा अटो बजार बढ्नुमा कारण के–के देख्नुहुन्छ ?
दसैँमा मानिसको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ । गाडी मात्र होइन, धेरैजसो वस्तु तथा सेवाको किनबेच दसैँमा नै बढी हुन्छ । दसैँमा व्यापारीको व्यापार बढेको हुन्छ । कर्मचारीले बोनस पाएका हुन्छन् । रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि दसैँमा बढी हुन्छ । यसले मान्छेको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको हुन्छ । नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँ हो ।
दसैँमा नयाँ वस्तु जोड्ने, नयाँ कपडा लगाउने, मीठो खानुपर्ने चलन छ । यसले पनि दसैँमा व्यापार व्यवसाय चम्किन्छ । दसैँको लामो बिदामा आफ्नै गाडीमा परिवार लिएर घुम्न जान पाए हुन्थ्यो । टीका लगाउन पनि आफ्नै कार चढेर जाऔँ भन्ने हुने रहेछ । यही समयमा अटो व्यवसायीले छुट र उपहार पनि ल्याउँछन् । विविध कारणले दसैँमा प्यासेन्जर कार र बाइकको बिक्री बढ्छ ।
नेपालको कार बजारमा टाटाको उपस्थिति कस्तो छ ?
प्रत्येक वर्ष टाटा कारको उपस्थिति राम्रै बढिरहेको छ । कमर्सियल भेहिकलमा अग्रणी रहेको टाटाको स्ट्रेन्थ नै डिजेल इन्जिन थियो । कम्पनीले डिजेल इन्जिनमा पहिलोपटक इन्डिका कार बजारमा ल्यायो । पहिलो कारले बजार राम्रै पायो । ग्राहकको विश्वास जित्न सक्यो ।
पहिल्यैदेखि डिजेल कारभन्दा पनि पेट्रोल कारको माग बढी थियो । सुरुवाती समयमा टाटाको पेट्रोलमा बलियो उपस्थिति नहुँदा मान्छेले अरू ब्रान्ड रोजिरहेका थिए । तर, अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ । टाटाले पनि वल्र्डक्लास टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर पेट्रोल कारहरू ल्याइरहेको छ । टाटाले रियलाइज पनि ग-यो, पेट्रोल र डिजेलमा वल्र्डक्लास टेक्नोलोजी नल्याई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । यसो हुँदा टाटा पनि टेक्नोलोजीमा केन्द्रित हुन थाल्यो । यससँगै टाटाले टोक्नोलोजीमा सहकार्य पनि बढाउँदै गयो । उत्पादनहरू परिमार्जन गर्दै लग्यो ।
टाटाले ‘होराइजन नेक्स्ट’ नारा लिएर अघि बढ्यो । वल्र्डक्लास टेक्नोलोजी अंगीकार गरेपछि मान्छेको धारणा पनि परिवर्तन हुँदै गयो । टाटाले कारमा प्रिमियम फिचर्सलाई पनि जोड दिन थाल्यो । प्रिमियम कारमा राखिने फिचर्स टाटा कारमा राख्न थालियो । प्रविधि र फिचर्ससँगै डिजाइनलाई पनि उत्तिकै जोड दिइयो । टाटा टियागो, टिगोर, नेक्सनलगायत मोडलले बजार तताइरहेका छन् । टाटाको प्यासेन्जर कारको ग्रोथ राम्रो छ । नेपालीले पनि टाटा कार मन पराइरहेका छन् । अहिले मिहिनेत गरेर ग्राहक खोज्नुपरेको छैन, ग्राहक आफैँ टाटाका कार खोज्दै आइरहेका छन् ।
नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँ हो । दसैँमा नयाँ वस्तु जोड्ने, नयाँ कपडा लगाउने, मीठो खानुपर्ने चलन छ । यसले पनि दसैँमा व्यापार व्यवसाय चम्किन्छ । दसैँको लामो बिदामा आफ्नै गाडीमा परिवार लिएर घुम्न जान पाए हुन्थ्यो । टीका लगाउन पनि आफ्नै कार चढेर जाऔँ भन्ने हुने रहेछ । यही समयमा अटो व्यवसायीले छुट र उपहार पनि ल्याउँछन् । विविध कारणले दसैँमा प्यासेन्जर कार र बाइकको बिक्री बढ्छ ।
टाटाको विद्युतीय कार पनि ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले नाडा अटो सोमा विद्युतीय कार प्रदर्शनीमा राखेका थियौँ । अहिले विश्वव्यापी ट्रेन्ड पनि विद्युतीय कारमा देखिन थालेको छ । चीन र भारतले पनि विद्युतीय कारमा फोकस गरिरहेका छन् । विद्युतीय कारको भविष्य उज्ज्वल छ । टाटाले पनि विद्युतीय कार उत्पादन गरिरहेको छ ।
हामी नयाँ प्रोडक्ट ल्याउँदा पहिला परीक्षण गर्छौँ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, सडक अवस्था, ड्राइभिङ कल्चरलाई विद्युतीय गाडीले ‘मिट’ गर्छ कि गर्दैन हेर्छौँ । अटो मेलामा ल्याएको कारलाई अहिले ‘टेस्ट’ गरिरहेका छौँ । हामीले विद्युतीय कारको राम्रोसँग परीक्षण गर्नेछौँ, ताकि भोलि उपभोक्ताले गुनासो गर्ने ठाउँ नरहोस् । छिट्टै विद्युतीय कार बिक्री गर्नेछौँ ।
नेपालमा टाटाका धेरै सेगमेन्टहरू उपलब्ध छन् । टाटाको कुन सेगमेन्टको उपस्थिति कुन ठाउँमा छ ?
टाटाको कमर्सियल भेहिकलमा झन्डै ६५ प्रतिशत बजार हिस्सा छ । टाटाको सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ भनेको भेराइटी हो । टाटाका यति धेरै सेगमेन्टहरू छन्, जुन अरू कसैका छैनन् । टाटाका सबै सेगमेन्टहरू उत्तिकै अब्बल छन् । टाटाको सानो एसदेखि लिएर ठूला–ठूला बस, ट्रकसम्म उपलब्ध छन् ।
कमर्सियलतर्फ सबै सेगमेन्टमा मार्केट लिडर छौँ । लामो दूरीमा चल्ने लक्जरी बसमा हाम्रो ९७–९८ प्रतिशत बजारहिस्सा छ । सिटी बस, स्कुल बसमा ७१–७२ प्रतिशत मार्केट सेयर छ । पिकअपमा पनि बजारहिस्सा बढेर ५१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । टाटा योद्धाले पिकअपको मार्केट बढाएको हो ।
नेपालको अटो बजारमा प्रतिस्पर्धा चर्किँदै छ । धमाधम नयाँ ब्रान्डहरू प्रवेश गरिरहेका छन् । बजारमा टाटालाई लिडर बनाइराख्न कस्ता योजना छन् ?
गएको वर्ष नेपालमा गाडी बिक्री राम्रो भयो । यो वर्ष पनि पक्कै राम्रो हुनेछ । नेपालमा जसरी बजार बढिरहेको छ, यसलाई क्यास गर्न सबै लागिहाल्छन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले गति लियो । नवनिर्माणले पनि गति लिइरहेको छ । बजेट पनि विकास निर्माणमै केन्द्रित छ । यसले हेभी भेहिकलको बिक्री बढाइरहेको छ । यो क्षेत्रमा सबैले सम्भावना देखिरहेका छन् ।
इन्डियामा गाडीका जति कम्पनी छन्, अधिकांशको नेपालमा उपस्थिति छ । यसले प्रतिस्पर्धा एकदमै बढेको छ । प्रतिस्पर्धा बढेपछि चुनौती पनि थपिन्छ । त्यो चुनौती चिर्नुपर्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज टाटाले जुन किसिमको बजार हिस्सा लिएर बसिरहेको छ, त्यसलाई टिकाइराख्नु हो । हामी बजारहिस्सा अझै बढाएर लैजाने भनेर लागिरहेका छौँ । यसका लागि तीनवर्षे रणनीति बनेको छ ।
हामीले प्रोडक्ट डिफ्रेन्सेसन कसरी गर्न सकिन्छ ? उपभोक्तालाई अधिकतम लाभ कसरी दिन सकिन्छ ? टाटाको बिक्रीपछिको सेवा कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ ? ग्राहकहरू के खोजिरहेका छन् ? हामीले के गर्दा ग्राहकलाई फाइदा दिन सकिन्छ ? हामी अधिकतम सेवासुविधा र लाभ दिनेतर्फ लागिरहेका छौँ । हामीले ग्राहककेन्द्रित रणनीति बनाएका छौँ ।
कमर्सियल भेहिकल किन्ने ग्राहकको व्यापारमा कसरी बढीभन्दा बढी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ । टाटाले नयाँ–नयाँ इनोभेसन गरिरहेको हुन्छ, त्यही इनोभेसन लिएर ग्राहकसमक्ष जान्छौँ । जसले गर्दा ग्राहकले अर्को ब्रान्डबारे सोच्नु पनि हुनेछैन ।
ग्राहकले सिप्रदीमा पाउने अनुभव ‘बेस्ट’ हुनुपर्छ । ग्राहकले सिप्रदीमा इन्क्वायरी गर्दादेखि गाडी किन्दा र चलाउँदासम्म राम्रो एक्सपेरियन्स पाउनुपर्छ । टाटाको प्यासेन्जर कारको सोरुम वल्र्डक्लास छ । सेवा दिने कर्मचारी तालिमप्राप्त छन् । टाटाको जत्तिको सोरुम कसैको छैन । टाटाले विश्वभर एउटै बेन्चमार्क तोकेर सोरुम विस्तार गरिरहेको छ ।
अहिले सबैले बिक्रीपछिको सेवाबारे पनि उत्तिकै ध्यान दिइरहेका छन् । बिक्रीपछिको सेवामा टाटाको रणनीति कस्तो छ ?
बिक्रीपछिको सेवा उत्कृष्ट बनाउन खोजिरहेका छौँ । हामीले नेपालभर नेटवर्क विस्तार गरिरहेका छौँ, ताकि हामी ग्राहकको नजिक पुग्न सकौँ । हाम्रा नेपालभर ६१ नेटवर्क छन् । यी नेटवर्कले पूरा नेपाल कभर गर्न सक्दैन । किनकि, टाटाले एक लाखभन्दा बढी गाडी बिक्री गरिसकेको छ । देशका कुनाकाप्चासम्म टाटा पुगिसकेको छ । नेटवर्क नपुगेको ठाउँमा मोबाइल सर्भिसतर्फ जुटेका छौँ । गाडी बिग्रिएको चार घन्टाभित्र पुगेर सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ ।
दुर्गम ठाउँमा गाडी बिग्रिँदा नयाँ कन्सेप्ट ल्याएका छौँ । इन्डियामा भन्दा उत्कृष्ट मोबाइल वर्कसप सर्भिस ल्याएका छौँ । हामीले ठूलो गाडीमा स्पेयर्स पार्टस्को काउन्टर, गाडी मर्मत गर्ने औजार र मेकानिक्स सुत्ने ठाउँसहितको मोबाइल सर्भिस भेहिकल तयार पारेका छौँ । पूर्ण सर्भिस सुविधा भएका ४ वटा गाडी छन् । यो सेवा अझै थप्दै छौँ । यसको रेस्पोन्स पनि राम्रो छ ।
त्यस्तै हामी टाटाका सबै गाडीलाई चलाइराख्न ‘जिरो अफरोड’ सेवा ल्याएका छौँ, ताकि कुनै गाडी बाटोमा बिग्रिएर बस्नुनपरोस् । आगामी तीन वर्षभित्र पूर्ण रूपमा जिरो अफरोडमा पु-याउँछौँ । यसको व्यापक तयारी भइरहेको छ । हामी अलि फरक सोचले अगाडि बढिरहेका छौँ । हाम्रो अभियानलाई ग्राहकले पनि साथ दिइरहेका छन् ।
टाटा मोटर्सले कमर्सियल भेहिकलमा कत्तिको हाइटेक प्रविधि अपनाएको छ ?
टाटा मोटर्सले प्यासेन्जर कारमा मात्र होइन, कमर्सियल गाडीमा पनि वल्र्डक्लास प्रविधि आत्मसात् गरिरहेको छ । टाटाका बस वल्र्डक्लास छन्, सँगसँगै ठूला ट्रक र पिकअप गाडी पनि । टाटाले ब्राजिलको मार्कोपोलो कम्पनी खरिद गरेर अत्याधुनिक बस उत्पादन गरिरहेको छ । मार्कोपोलोको अत्याधुनिक प्रविधि अपनाएपछि बसमा व्यापक सुधार आएको छ । यस्तै, उत्कृष्ट प्रविधिका लागि स्पेनको स्पानिया कम्पनी पनि खरिद ग-यो ।
टाटा बस उच्च प्रविधिका छन् । कोरियाको चर्चित अटोमोबाइल्स कम्पनी ‘देउ’ खरिद गरेर उत्कृष्ट बस बनाइरहेको छ । ‘देउ’ कोरियाको कमर्सियलतर्फ ठूलो कम्पनी हो । टाटाले चर्चित कम्पनी ल्यान्डरोभर ज्यागुअर पनि किन्यो । टाटा मोटर्स ग्राहकलाई कसरी नयाँ टेक्नोलोजीका अत्याधुनिक गाडी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ । आन्तरिक फिचर्समा पनि जोड दिइरहेको छ ।
टाटाले ‘होराइजन नेक्स्ट’ नारा लिएर अघि बढ्यो । वल्र्डक्लास टेक्नोलोजी अंगीकार गरेपछि मान्छेको धारणा पनि परिवर्तन हुँदै गयो । टाटाले कारमा प्रिमियम फिचर्सलाई पनि जोड दिन थाल्यो । प्रिमियम कारमा राखिने फिचर्स टाटा कारमा राख्न थालियो । प्रविधि र फिचर्ससँगै डिजाइनलाई पनि उत्तिकै जोड दिइयो । टाटा टियागो, टिगोर, नेक्सनलगायत मोडलले बजार तताइरहेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत हेभी गाडीमा कर बढायो । टाटाका कुन–कुन गाडी प्रभावित भए ?
टाटाका सम्पूर्ण गाडी प्रभावित भएका छन् । हाम्रो इन्ट्री लेबल गाडी नै १२ सय सिसीको हो । हजार सिसीभन्दा माथिका सबै गाडी प्रभावित छन् । नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसार प्यासेन्जर बोकेर गाउँ–गाउँ पुग्ने टाटा सुमो सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो । यो ग्रामीण क्षेत्रको भरपर्दो सार्वजनिक यातायात हो । नेपालमा सुमो कमर्सियल गाडी हो । सडक कर बढेपछि बस, ट्रक, पिकअप गाडी पनि प्रभावित भए । तर, कार र जिपजति भने होइन ।
नेपालीका लागि गाडी अत्यावश्यक भइसक्यो । नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मेरुदन्ड ट्रान्सपोर्टेसन बनिसकेको छ । नेपालमा ट्रान्सपोर्टेसनका लागि अटोमोबिलको विकल्प पनि छैन । किनकि, हामीसँग पानी जहाज छैन । रेल पनि छैन । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अटो ऋणमा कडाइ गर्नुहुँदैन । देश विकासका लागि ट्रान्सपोर्ट अत्यावश्यक छ ।
बजेटका कारण टाटाको बिक्री कत्तिको प्रभावित हुनेवाला छ ?
यसले बिक्रीमा खासै असर पर्दैन । हेभी सिसीका गाडीमा प्रभाव पार्ला । जब गाडी मान्छेको आवश्यकता बन्छ, मान्छेलाई जरुरत पर्छ, तब एक–दुई छाक नखाएर भए पनि गाडी किन्छन् । मध्यम वर्ग र उच्च वर्गले गाडीलाई आवश्यकताका रूपमा लिइसक्यो । यदि नभई नहुने चिज हो भने कर बढाए पनि गाडीको बिक्री घट्नेवाला छैन । अरू खर्च कटाएर भए पनि किन्छन् । सानो गाडीमा त्यति असर पर्दैन । कमर्सियल गाडीमा बजेटको प्रभाव परेको छैन । खाली सडक कर मात्र बढेको हो ।
सरकारले कर बढाउँदै लगे अटो व्यवसायको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अटोमोबाइल विकासको सारथि हो । मलाई लाग्दैन, सरकारले विकासको सारथिको भविष्य नै संकटमा पार्छ । सरकारले पूर्वाधारमा ठूलै बजेट छुट्याएको छ । विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च भएर अटोमोबाइल्सको बजार बढ्नेछ । नेपालमा गाडीको संख्या धेरै होइन, पूर्वाधार पर्याप्त नभएको हो ।
विदेशमा जनसंख्या र गाडीको संख्या बराबर हुन्छ । नेपालमा जनसंख्या कति छ, गाडी कति छन् । यो हेर्दा थाहा हुन्छ, अझै कति गाडी आवश्यक छ । हाम्रो देशमा भन्दा साँघुरो सडक भएका मुलुकमा ट्राफिक जाम देखिन्न । तर, हाम्रो सहरमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा, ड्राइभिङ अनुशासन नहुँदा जाम बढेको हो । अर्को, पूर्वाधार पनि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।
#टाटा #राजनबाबु श्रेष्ठ #विश्वस्तरीय’ प्रविधि